AHHHHH IMIBUKO EMANGALISAYO NJALO @ LAKE DAZE ESCAPE! - I-Airbnb
AHHHHH IMIBUKO EMANGALISAYO NJALO @ LAKE DAZE ESCAPE!
203 okushiwo abanye
Whittington Township, Arkansas, i-United States
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Sherri
U-Sherri Ungumbungazi ovelele
ILake Daze Escape itholakala emphakathini onamasango futhi iyindawo efanelekile yokubaleka! Ingaphansi kokuphonswa kwetshe onqenqemeni lwamanzi lweLake Hamilton elihle. Nge-boardwalk, izihlalo zasolwandle, ivulandi elimboziwe, indawo yepikiniki namagagasi anokuthula agelezayo - I-Lake Daze IPHELELE indawo yokubaleka nokubaleka! Uma ulangazelela izindawo ezikhangayo okufanele zinikezwe yi-Hot Springs, akukude. Ngokuhlala isikhathi eside - Izaphulelo zamasonto onke nenyanga ziyatholakala.
SICELA UFUNDE IMINININGWANE NGAPHAMBI kokugcina - Futhi buyekeza Ezinye Izinto Okumelwe Ziqashelwe
ngena noma nini ngemva kuka-3
isikhathi sokuphuma ngu-11
Le-condo isechibini elihle lase-Lake Hamilton. Indawo yethu imayelana nemizuzu engu-15-20 yokuhamba ngemoto ukuya ezindaweni eziningi zedolobha le-spa.
Sithemba ukuthi isikhathi sakho e-Lake Daze sizojabulisa. Kuyinjabulo yethu ukulungiselela isivakashi ngasinye indawo. Ngeshwa, ngenxa yesenzakalo esandayo sezinto zokuhlanza nezinto ezithathiwe, sinomuzwa wokuthi kudingeka sicacise ukuthi iyini i-Lake Daze Property. Sicela uzizwe ukhululekile ukusebenzisa noma yini e-Condo phakathi nokuhlala kwakho. Sicela uqaphele ukuthi uma ungazange ulethe into e-Lake Daze - akufanele isuswe endlini. Sicela uyishiye e-Lake Daze uma ubuyela ekhaya.
Izindleko ezengeziwe zizokwenzeka ezintweni ezingekho - kuhlanganise nezinto zokuhlanza, imidlalo, imihlobiso, izinto zombhede namashidi (ngokukhulu ukuzimisela) - Sikhethe ukugcina amanani ethu ephansi ukuze ukuhlala kwezivakashi zethu kungabizi-izivakashi zingasisiza siqhubeke sigcina amanani ethu ephansi ngokungasusi izinto eziseLake Daze Property. Asikwazi ukugcina inani liphansi lapho izinto zezindleko eziphakeme zithathwa.
Lesi sitatimende asikona omagazini noma izincwadi :) Ngezinye izikhathi ichibi elihle elifundwayo yilokho okudingekayo futhi uma uqala enye yezincwadi zethu sifuna ukuthi ukwazi ukuqeda-vele uthathe eyodwa - hhayi konke - ukuze isivakashi esilandelayo sikwazi ukujabulela. Uma ufuna ukwengeza eqoqweni- wamukelekile futhi! Akuyona inhloso yethu ukukhubekisa-ukuthi nje ungafihli lutho ngokulindelekile.
Le ndawo iyi-condo esezingeni eliphansi endaweni enamayunithi amabili futhi ilungiswe ngokuphelele (2019) ukuze ithokomale futhi ilungele izivakashi zayo.
Ikhishi linakho konke okudingekayo (izinto zokupheka, amapuleti, izitsha, izitsha zesiliva, amaqebengwana, izinongo ezihlukahlukene). Sinewayini elifudumele/elipholile - i-Keurig coffee pot kanye nokuhlinzekwa okukhulu kwama-K pods kuyatholakala.
I-Lake Daze ayinawo ubhavu - ishawa kuphela
Iyunithi incane - amazinga okushisa alawulwa ngeyunithi yokushisisa nomoya efana nalokho obuzoba nakho ekamelweni lasehhotela.
Umbhede uyindlovukazi enethezekile. I-dresser ekamelweni lokulala inamachweba wezingubo zokugqoka zamashaja efoni akho anokukhetha kokukhanyisa okuthakazelisayo. (inkinobho iseceleni kwechweba elingu-)
Igumbi lokugezela linamathawula okugeza athambile. Sinikeza umshini wokomisa izinwele nekhithi yosizo lokuqala (kulabo abathanda kakhulu). I-ayini nebhodi loku-ayina phezu kwetafula kuyatholakala. Amathawula asebhishi nawo anikeziwe.
I-55 inch SMART TV ukuze ufinyelele kuma-akhawunti akho we-Netflix, i-Vudu, i-Rackle ne-Amazon Prime. I-Vizio WATCHFREE iyatholakala futhi uma uthanda.
Sifake imidlalo yebhodi namakhadi okudlala kanye ne-hammock yabantu abangu-2 okulula ukuyibeka futhi ibuyele emuva uma usukulungele. Umdlalo we-Baggo ohlangothini lwakho lokuncintisana:)
LENA iyunithi yokubhema- ukubhema kuvunyelwe ngaphandle endaweni evamile eqhele ngebanga elifushane ukusuka kuvulande futhi itholakala kuzo zonke izivakashi/ abanikazi ababhemayo. Sicela uqaphele * * * ngisho noma izivakashi zinekhadi lensangu lezokwelapha - - ukubhema kwanoma yiluphi uhlobo akuvunyelwe ngaphakathi kwe-condo. Ukugcinwa kwensangu kuyunithi nakho akuvunyelwe — izimali ezengeziwe zizosetshenziswa uma zingalandelwa.
Kuye ngomhlinzeki wakho, isevisi yeselula ingase ibe phakathi nendawo. Mane nje uvule i-wifi ocingweni lwakho futhi kufanele ulungele ukuhamba.
Indawo evamile nayo inama-grill wamalahle. Sifake i-Coleman propane grill kuvulande. Lapho indawo evamile imatasa, iphunga lentuthu lingase libe khona. Sifake isihlanzi somoya ukusiza ukunciphisa intuthu uma ukhona. Kuyasiza nalabo abanakekelayo ukungezwani komzimba nokudla okuthile emoyeni. Isihlambululi singalungiswa yizivakashi.
Izihlalo ezingu-2 zasolwandle nezihlalo zokukhempa ezingu-2 ezigoqene ziyatholakala ukuze uzisebenzise uma ufuna ukuphuma kuvulande futhi ujabulele ukuhlala ngasechibini.
4.93 out of 5 stars from 203 reviews
4.93 · 203 okushiwo abanye
Intwasahlobo nehlobo izikhathi eziyinhloko ze-Hot Springs neLake Hamilton. Izinyanga zasehlobo zigcwele amathuba okwenza izinkumbulo echibini! I-bypass iseduze okwenza kube uhambo olusheshayo lokujabulela zonke izindawo ezikhangayo ezitholakala yi-Hot Springs - okuhlanganisa i-Oaklawn Race Track ne-Casino noma i-Hot Springs yedolobha - unyaka wonke! Ungakhohlwa ukubekisela i-Oaklawn Racing Season!
Lona umphakathi onobungani onokubukwa okuhle kweLakeside kude nokuphithizela kwedolobha.
Intwasahlobo nehlobo yisikhathi esihle sokudonsa isikebhe noma uphumule kwezinye zezihlalo zethu zasolwandle eduze kwechibi. Izivakashi nezivakashi zivame ukuletha izikebhe noma ama-kayak ngalesi sikhathi ukuze uthole i-paddle enokuthula. Le nkimbinkimbi inomqondo oqinile womphakathi futhi yamukela kakhulu izivakashi. Wamukelekile njalo ukuthi uhlanganyele futhi uhlangane!
Ekupheleni kuka-Okthoba kuya ekuqaleni kukaNovemba indawo yechibi iyashintsha - ichibi liyehliswa futhi izilwane zasendle ezizungezile indawo zibonakala kakhulu. Izinyamazane zivame ukubonakala ziwela kanti nezinkozi ziyabonakala nazo. kuthulekile futhi kuncane ukuhamba kwezimoto njengoba isikole siqala futhi ekupheleni kwehlobo. Lesi isikhathi esihle sokuba wedwa kanye ne-R & R encane! :)
I-History Downtown Hot Springs iqhele ngamamayela angu-10 kuphela kanti i-Oaklawn Racing and Casino ingamamayela angu-12. Igrosa ye-Harps ingamamayela angu-4.6 nje phansi komgwaqo eduze ne-McDonald's. Ungafika kunoma yiziphi izindawo ezikhangayo zedolobha le-spa cishe imizuzu eyi-15-20, kuya ngethrafikhi nomzila owukhethayo.
#mom #gammyof2 #believer - love sharing the beauty of our area with others! Hot Springs is a wonderful place for a get away all year long!
Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ukuhlala kwakho kuyajabulisa futhi kuntofontofo. Sicela usazise uma kukhona izikhalo ukuze zixazululwe ngokushesha.
USherri Ungumbungazi ovelele